चिसोले कठ्यांग्रियो निसी भूजी : हिमपातले ढोरपाटनको जनजीवन प्रभावित !(तस्बीर) | ebaglung.com
चिसोले कठ्यांग्रियो निसी भूजी : हिमपातले ढोरपाटनको जनजीवन प्रभावित !(तस्बीर)
२०७५ पुष २३, सोमबार ०८:५४	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कुमवीर विश्वकर्मा, बुर्तिवाङ २०७५ पुस २३ । गए राति देखी निसी,भूजी र तमानको माथिल्लो भाग र ढोरपाटनमा हिमपात भैरहेको छ । गत वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष हिमपात सँगै चिसो एकदमै बढेको स्थानीयबासीहरुले बताएका छन् ।
ढोरपाटनमा केहि दिन पहिले हल्का हिमपात भएपनि आजको हिमपातले जनजीवन कठ्याँग्रिएको छ । चिसोका कारण मानिसहरु घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । गाईबस्तु चौपायाहरुलाई घाँस पात, दानापानीको जोहो गर्न पनि धौ भएको अवस्था छ ।
“हिमपात त गत वर्षहरुमा पनि हुन्थ्यो, तर यस वर्षको हिमपात सँगै जातिबित्तिनै चिसो बढेको छ” ढोरपाटनका सत विश्वकर्माले बताए ।ढोरपाटनमा मुस्किलले फोन सम्पर्क हुन सकेपनि नेट नहुँदा त्यहाँका तस्वीरहरु प्राप्त गर्न कठिनाई भएको छ । निसीको माथिल्लो भागमा हिमपात भैरहेको तस्वीरहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बोवाङको माथिल्लो भागहरु हिमपातले सेताम्मै बनेको बोबाङबाट सहकर्मी दिलमायाँ अदैले जानकारी दिएकी छिन् । हिउँ परेसंगै जाडोपनि निकै बढेको दिलमायाँले बताईन् ।
यसैवीच हिमपातका कारण बुर्तिवाङ-रुकुम चल्ने सवारी साधनहर ठप्प छन् । बागलुङ र रुकुमको सीमाना पाथी हाल्नेमा अहिले भारी हिमपात भैरहेको छ ।
ढोरपाटनमा हिमपातको तस्वीर
ढोरपाटनमा हिँजो राति देखी परेको हिमपातको तस्वीर भरखर मात्र प्राप्त भएको छ । ढोरपाटनमा नेट नचल्नाले हिमपातका तस्वीरहरु अपडेट गर्न नपाईरहेको अवस्थामा कामविशेषले ढोरपाटनबाट बुर्तिवाङ झरेका एकजना स्थानीयले हिमपातका केहि तस्वीर सहकर्मी दीपक पराजुलीलाई उपलव्ध गराएका छन्, जस्लाई यहाँ पोष्ट गरिएको छ:
प्रवास : युएईमा १२ महिला सहित २०० जना नेपाली जेल जीवन जिउन बाध्य !
सदरमुकाममा रहेको वीरेन्द्र-ऐश्वर्य पार्क (उद्यान)को संरक्षण नहुँदा कुरुप बन्दै !